Kooxda Chelsea Ayaa Guushii Ay Ka Gaadhay Kooxda Tottenham Ku Sii Adkaysatay Kaalinta Afaraad Ee Horyaalka Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Chelsea ayaa guul 2-1 ah ka gaadhay kooxda Tottenham oo marti u ahayd, Kulankan ayaa ahaa mid ay Blues goolasha u dhaliyeen Marcos Alonso iyo Oliver Giroud oo kulankan labaduba si lama filaan ah ugu soo bilawday kahor inta uusan daqiiqadihii ugu dambeeyay gool iska dhalinin Antonio Rudiger.
Guushan ayaa ka dhigan in Chelsea ay booska afraad ka xidhatay Tottenham oo markii hore hal dhibic ka dambaysay balse ay haatan afar dhibcood ka sarre mareen.
Tottenham ayaa daqiiqadii 10-aad ee kulankan ku dhawaatay inay hoggaanka la wareegto, Lucas Moura iyo Bergwijn oo weerarka ugu midaysnaa ayaa kubadda si qurux badan u wada ciyaaray iyadoo uu Lucas banaanka xerada ganaaxa ka darbeeyay kubad xoogan balse Caballero ayaa badbaadin cajiib ah sameeyay.
Chelsea ayaa daqiiqadii 12-aad ee kulankan markeeda fursad weyn abuurtay, Marcos Alonso ayaa kubad halis badan meel fog uga furay Mount oo goolka hortagay laakiin kubad xoogan oo uu laagay da’yarka Blues ayuu badbaadin markiisa sameeyay goolhaye Lloris.
Olivier Giroud ayaa hoggaanka u dhiibay Chelsea, Weeraryahanka ree France ayaa marka hore kubad loo furay darbo xoogan uu ka badbaayay goolhaye Lloris markale Barkley oo kubadda soo noqotay laagay ayaa birta garaacay waxaana mar saddexaad kubadda helay Giroud kaas oo xakameeyay kaddib laag gantaal ah meel hoose ka dhigay goolka Lloris.
Chelsea ayaa fursad kale heshay daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta, Xiddigaha Lampard oo ahaa kuwo aad u dhiiran kulankan ayaa markan kubadda oo ay iska soo difaaceen xiddigaha Tottenham banaanka xerada ganaaxa ka laagay Alonso oo wax yar u mariyay birta sarre ee goolka.
Tottenham ayaa fursado abuurtay kahor dhammaadkii qaybta hore, Sanchez ayaa ugu horreynba kubad gees ka tuur ahayd oo uu madaxeeyay goolka Chelsea kor mariyay halka Tanganga baas meel dheer looga soo furay oo uu goolka lahor tagay uu xakamayn kari waayay sidaasna ay kubaddu ku baxday.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-0 ay hoggaanka ku haysay Chelsea, Xiddigaha uu Lampard kulankan usoo xushay ayaa ahaa kuwo muquuniyay kana tamar badnaa ciyaartoyda Mourinho qaybtaas hore.
Chelsea 2-0 Spurs – Marcos Alonso ayaa laba jibaaray hoggaanka Chelsea, Mason Mount ayaa kubad uu soo jiiday goolka ugu hor furay Barkley kaas oo isna kubadda isku dhaafiyay Alonso oo cidlo joogay iyadoo uu daafaca ree Spain meel fog kubad xoogan oo joog hoose ah kaga dhaliyay goolhaye Lloris.
Daqiiqadii 52-aad ee kulankan ayay Chelsea ku dooday in kaadh casaan ah loo taago Lo Celso kaddib markii uu xiddiga Tottenham cagtiisa ku dul qabtay lugta kabtan Azpilicueta balse garsoore caawiyaha VAR ayaa lagu diiday.
Ka dib hoggaanka labada gool ah ee ay kulankan ku qabatay Chelsea, Ciyaarta ayaa noqotay mid sidii hore aan u dardar badnayn iyadoo ay Chelsea diirada saaraysay inay kulanka halkaas ku hayso.
Chelsea ayaa fursad dahabi ah heshay daqiiqadii 79-aad ee ciyaarta, Mason Mount oo kulankan wacdarro dhigayay ayaa kubad goolka afkiisa hore u dhigay Abraham oo bedel ku yimid kaas oo isku tuuray kubadda balse darbo sahlan u dhiibay goolhaye Lloris.
Marcos Alonso ayaa goolkiisii labaad iyo kiisii saddexaad ee ciyaartay aad ugu dhawaaday kaddib markii uu birta ku garaacay laag xor ah oo uu ganay.
Kooxda Tottenham ayaa gool dib usoo ceshatay daqiiqadii 89-aad, Lamela oo kubadda kasoo shaqaystay ayaa baas uu goolka hor dhigayay ku aadiyay Rudiger kaas oo si qaldan iskaga dhaliyay goolka kubaddana daba mariyay Caballero.